Darpan Nepal – जनकपुर बाटअायो अर्को ठुलो दुःखद खबर
जनकपुर बाटअायो अर्को ठुलो दुःखद खबर
दिपेन्द्र यादव जनकपुरधाम । बैशाख २८ गते भोली शुक्रबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउदैछन् । मोदीले नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन औपचारिक रुपमा प्रदेश २ को राजधानी धनुषा भ्रमन गर्नेछन् । तर उनले भ्रमणगर्ने जिल्लाको जनकपुरधाम स्थित १२ बिधामा वर्षाको पानी जम्नुका साथै बाह्र विघा वरपर फोहोर जमेका छन् ।विभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका दुलहीझैँ सजिएको भनिए पनि वास्तविकता अर्कै रहेको छ । वास्तविकता हो प्रदेश नं. २ को राजधानीमा फोहोरको ओइरो र वर्षातको पानी । यता जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई सफा बनाउनका लागि सशस्त्र प्रहरीका टोलीले हातहातमा कुचो र बेल्चा लिएर नगर सफा गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै यही वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने राजकीय भम्रणका लागि नेपाल आउने भएपछि जनकपुरलाई दुलहीझैँ सजाउन लागेका छन् ।यता जनकपुर भम्रणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोेदी पहिले पुजाका लागि जानकी मन्दिरमै पुग्ने भएपछि मन्दिरमा पुजाको तयारीमा पुजारी अर्थात् महन्तहरु व्यस्त बनेका छन् ।शुक्रबार जनकपुर आउँन लागेको भारतीय प्रम मोदी जनकपुर विमानस्थलमा ओरलिपछि पूजाका लागि पहिले जानकी मन्दिर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै यता मन्दिर बाहिर उनलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेपनि मन्दिर भित्र जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले स्वागत गर्ने भएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतका लागि करोडौँ लगानी लगाएर जानकी मन्दिरको बाह्र बिधामा पानी जमेका कारण सुरक्षाकर्मीहरु अहिले पानी निकाल्न व्यस्त बनेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने भ्रमणका लागि सुरक्षा दिन आएका सुरक्षाकर्मीहरु मोलीले सम्बोधन गर्ने सभा स्थल छेउमा जताततै वर्षाको पानी जमेका कारण सुरक्षाकर्मीहरु सो सभा स्थलमा जमेको पानी निकाल्नका लागि पम्पसेट प्रयोग गरेर निकाल्न लागेका छन्|
Previous Postबाबु बितेपछि आमाले समेत छोडेकी अनुषा चिटिक्क परेर स्कूल जान थालिन् (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्नुहोस् ) Next Postरुप फेर्ने तयारीमा वीर अस्पताल, यसरी हुँदैछ अहोरात्र काम